म चौधौँ महाधिवेशनमा सभापति पदको उम्मेदवार हुँ:: Naya Nepal
नेपाली कांग्रेसको युवा पुस्तामा एक से एक काविल नेतामध्ये एक हुन् कल्याण गुरुङ । कांग्रेसको विद्यार्थी सङ्गठन नेवि संघको सभापति हुँदै पार्टी केन्द्रीय समितिका सदस्य रहेका गुरुङले आगामी चौधौँ महाधिवेशनमा पार्टी सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने भएका छन् ।आ-आफ्नो योग्यता पुगेको पदमा उम्मेदवारी दिने आँट गरौँ तर उम्मेदवारीलाई बार्गेनिङको साधन नबनाऔँ भन्ने उनको आह्वान छ । कांग्रेसको महाधिवेशन, पार्टीको आन्तरिक राजनीति र युवापुस्ताको सेरोफेरोमा गुरुङसँग खबरहबका लागि गोविन्द लुइँटेलले गरेको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार आउने फागुनमै हुन्छ ?
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्ने भनिएको छ । बैठकले सकेसम्म फागुनमै गर्ने गरी कार्यतालिका परिमार्जन गर्छ । क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरण, वडा तहदेखि प्रदेश तहसम्मका अधिवेशनहरू माघ महिनाभित्र गर्न सक्यौँ भने तोकिएअनुसार फागुन ७ देखि नै हामी महाधिवेशन गर्न सक्छौँ । माघभरिमा सकिएन भने फागुनमा महाधिवेशन गर्न गाह्रो हुन्छ । अब हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले यी सबै विषयमा निर्णय गर्छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवा सकेसम्म महाधिवेशन पर धकेल्न चाहनुहुन्छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । नेतृत्वमा पुग्ने आन्तरिक दाउपेच र कोभिड–१९ ले पार्ने असरमध्ये फागुनमा महाधिवेशन नहुने सम्भावनामा कुन चाहिँ कारण बलियो देख्नुहुन्छ ?
मूलतः कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड–१९ कै कारणले अहिलेसम्म काम ढिलो भएको हो । यसबाहेक अरू कुरामा शंका गर्नु गलत हुन्छ । संक्रमण दर अलिक कम भयो भने पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसारै काम गर्न सक्छौँ । सकेसम्म हामी फागुनमै चौधौँ महाधिवेशन गर्छौं । फागुनमा भएन भने पनि जेठसम्ममा गर्छौं ।कोभिड–१९ केही कम भयो भने हामी माघभरिमा प्रदेश तहसम्मका अधिवेशन सम्पन्न गर्न सक्छौँ । यसो भयो भने फागुनभरिमा महाधिवेशन गर्न सक्छौँ । संक्रमण अहिलेकै रूपमा बढ्दै गयो भने महाधिवेशनअघिका काम सक्ने सम्भावना कम हुन्छ । यसो भयो भने जेठभरिमा चाहिँ हामी गर्छौं ।
महाधिवेशन सकेसम्म पर धकेल्ने आन्तरिक दाउपेच चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ ?
म त्यस्तो दाउपेच हुने देख्दिनँ । महाधिवेशन नगर्ने चाल भनेर अन्यथा शंका गर्नु गलत हुन्छ । कोभिड–१९ को संक्रमण सबैले देखेकै छ । फागुनमा नभएर सर्‍यो भने पनि त्यो कोभिड–१९ संक्रमणकै कारणले हुनेछ । अर्को सम्भावना छैन ।
कांग्रेसका संघीय संरचनाहरू बनेका छैनन् । समायोजन र क्रियाशील सदस्यतामा धेरै ठाउँमा विवाद छ । कोभिड–१९ ले धेरै असर गरेन भने फागुनभरिमा महाधिवेशन हुने गरी तयारी पूरा हुन्छ ?
समायोजन लगभग सकिएको छ । पाँच–छ वटा जिल्लामा मात्रै बाँकी छ । क्रियाशील सदस्यता वडाबाटै नवीकरण र वितरण हुने व्यवस्था विधानमा छ । सोहीअनुसार काम हुन्छ । वडाबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू चयन हुन्छन् । यसपछि प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय तहको अधिवेशन, जिल्ला तहको अधिवेशन प्रदेश तहको अधिवेशन हुन्छ ।प्रदेश तहको अधिवेशनमा धेरै समय लाग्दैन । निर्वाचन समितिले तयारीको काम सकिएपछि वडादेखि प्रदेश तहसम्मको अधिवेशन दुई महिनामा गर्न सकिन्छ भनेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण कम भयो भने माघभित्रमा वडादेखि प्रदेशसम्मका अधिवेशनहरू गर्न सक्छौँ र फागुन महाधिवेशन गर्न सकिन्छ । निर्वाचन समितिले यसैअनुसार तयारी पनि गरेको छ ।कोभिड–१९ बाहेक अरू कुनै कारणले महाधिवेशन सर्ने सम्भावना हुँदैन । संक्रमण अझै डरलाग्दो रूपले फैलियो भने चाहिँ गाह्रो हुन सक्छ ।
चौधौँ महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व लिने आकाङ्क्षा धेरै जनामा देखिन्छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको दोहोरिने चाहना छ । रामचन्द पौडेल, विमलेन्द्र निधि, कोइरालाबन्धु, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला र अन्य केहीको पनि दाबी प्रकाशमा आएको छ । कस्तो देख्नुहुन्छ कांग्रेसको भावी नेतत्वको स्वरूप ?
सभापति पदका दाबेदारहरू जति बढी भयो, त्यति नै राम्रो हुन्छ । सबै पदमा अधिकतम उम्मेदवारी हुनुपर्छ । यसो हुँदा महाधिवेशन प्रतिधिहरूलाई उपयुक्त नेता छान्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ।धेरै उम्मेदवार हुँदा हामीले तीनवटा समस्याबाट छुटकारा पाउँछौँ । एक, परम्परागत गुटहरू रहँदैनन् । यो फाइदाको कुरा हो । दोस्रो, प्रतिनिधिहरूले उपयुक्त नेतालाई निर्वाचित गर्ने अवसर पाउँछन् । तेस्रो, योग्यहरूबाट अझ योग्य उम्मेदवार नेतृत्वका लागि चयन हुन्छ । यसबाट पार्टीलाई फाइदा हुन्छ ।
राजनीतिक दलहरूमा पुस्तान्तरणको कुरा हुने गर्छ, कांग्रेसमा त झन् बढी सुनिन्छ । पहिलो पुस्ता, दोस्रो पुस्ता, युवापुस्ता भन्ने कुरा हुन्छ । तपाईंहरूजस्ता धेरै नेता आफूलाई युवा भन्नुहुन्छ । पार्टीमा नेतृत्व विकास कसरी हुँदोरहेछ ? कि सोझै हस्तान्तरण हुनुपर्छ ?
नेतृत्व मागेर पाइँदैन । स्यालुट हानेर पनि पाइने होइन । नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा नै गर्नुपर्छ । कांग्रेसमा आज ७० वर्ष नाघेका सात जनाले नेतृत्व दाबी गर्नुभएको छ । ६० देखि ७० वर्ष उमेरका सातदेखि दश जनाको दाबी छ । पुस्ता पुरानो होस् कि नयाँ, प्रतिस्पर्धाबाटै नेतृत्वमा पुग्ने हो ।म चौधौँ महाधिवेशनमा सभापति पदको दाबेदार हुँ । म प्रतिस्पर्धामा छु । म सबै पुस्ताका उम्मेदवारहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छु । म आफ्ना वैचारिक, राजनीतिक र आर्थिक मुद्दाहरू लिएर महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूसामु जान्छु । प्रतिनिधिहरूले छानेको नेताले पार्टीको नेतृत्व गर्छ ।
राजनीतिमा युवा भनेको के रहेछ, उमेर कि राजनीतिक विचार, तपाईंको लामो अनुभवले के भन्छ ?
राष्ट्र संघले १५ वर्षदेखि २४ वर्षसम्मको उमेरलाई युवा भनेको छ । नेपालको राष्ट्रिय युवा नीतिले १६ वर्षदेखि ४० वर्षसम्मको उमेरलाई युवा मानेको छ । दुवै आधारमा हामी युवा होइनौँ । हामी नयाँ पुस्ता हौँ ।मेरो व्यक्तिगत धारणामा युवा भनेको त्यस्तो व्यक्ति हो, जसको निधारले कसैको पैताला नछोओस् । यस्ता स्वाभिमानीहरू युवा हुन्, उमेर जतिसुकै होस् ।
तपाईंले आफूलाई सभापति पदको दाबेदार भन्नुभयो । म अब कांग्रेसको पार्टी सभापति हुन विधानले मात्रै होइन, सम्पूर्णरूपले योग्य भएँ भन्ने आधार चाहिँ के के हुन् ?
विधानअनुसार १५ वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएको व्यक्ति सभापति पदको उम्मेदवार हुन सक्छ । विधानअनुसार म योग्य भएँ, नम्बर एक। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हाम्रो परिवारको तीन पुस्ताको योगदान छ, दुई ।तेस्रो कुरा, नेपाली कांग्रेसलाई अहिले सबैको भरोसाको केन्द्र बनाउनु परेको छ । यसो भयो भनेमात्रै कांग्रेसले ऊर्जा दिन सक्छ । त्यो ऊर्जाले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जीवन्त बनाउन सक्छ । यसको निम्ति हामीले गतिशीलता र बौद्धिक ऊर्जा समर्पित गर्नु छ । चौथो, आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई बहुमतसहितको ठूलो पार्टी बनाउनु छ, सबैको भरोसाको लोकप्रिय पार्टी बनाउनु छ । यसका लागि हामी अघि बढ्नु छ ।
नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा बीपी कोइराला पार्टी स्थापना गर्दै ३३ वर्षको उमेरमा कार्यवाहक सभापति हुनुहुन्थ्यो । टंकप्रसाद आचार्य पार्टी सभापति हुँदा ४५ वर्षभन्दा माथि हुनुहुन्थेन । मातृकाप्रसाद कोइराला ३६ वर्षको उमेरमा पार्टी सभापति हुनुभयो । बीपी ३९ वर्षको उमेरमा सभापति हुनुभयो ।गणेशमान सिंहले ४० वर्षको उमेरमा वीरगञ्ज महाधिवेशनमा सुवर्ण शमशेरसँग पार्टी सभापतिमा चुनाव लड्नुभयो । सुवर्ण शमशेर पनि ५० वर्षमुनि नै हुनुहुन्थ्यो । किसुनजी कार्यवाहक सभापति हुँदा युवा उमेरमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ त युवा उमेरमै सभामुख हुनुभयो ।बीपी कोइराला ४६ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । अहिलेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पनि ५० वर्ष उमेरको हाराहारीमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । शेरबहादुर देउवाले दशौँ महाधिवेशनमा ५२÷५३ वर्षको उमेरमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको हो ।यो इतिहासले देखाउँछ, नेपाली कांग्रेसको सभापति हुन पाको उमेरकै हुनुपर्छ भन्ने होइन । गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि कम उमेरमै महामन्त्री हुनुभएको हो । अलिक बढी पाको उमेरमा सभापति हुने गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइराला हो ।यसकारण, विचारमा दृढता र परिपक्वता, राजनीतिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुतासहित जसले लोकतान्त्रिक विचार आमजनताको बीचमा लगेर जसले नेपाली कांग्रेसलाई सबैको भरोसाको केन्द्रबिन्दु बनाउन सक्यो उसैले सभापति पदमा विजय प्राप्त गरेको इतिहास छ । र, भोलिको दिनमा पनि त्यही हुन्छ ।
कार्यकर्ताहरू र महाधिवेशन प्रतिनिधिको तहबाट हेर्दा जनाधारको हिसाबले तपाईं सभापति पदमा निर्वाचत हुने आधारहरू प्रष्ट पारिदिनुहोस् न !
नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पाँच वटा कुरा नेतृत्व पंक्तिबाट खोज्नुभएको छ । पहिलो कुरा, राजनीतिक न्याय । सबै साधारण सदस्यहरूले राजनीतिक न्याय पाउन सक्छन् भन्ने हुनु पर्‍यो । दोस्रो, राजनीतिक सुरक्षा । तेस्रो, राजनीतिक समानता र न्ययोचित वितरण । चौथो, यो पार्टीभित्र सबैको शेयरिङ हुन्छ भन्ने कुरा ।पाँचौँ, नेपाली कांग्रेस सबैको भरोसाको केन्द्रबिन्दु बन्नुपर्छ र यसको निम्ति सामाजिक, राजनीति र वैचारिक मुद्दाहरूमा प्रष्टसँग अभिव्यक्तिहरू दिन सक्ने हुनुपर्छ । र, यस्ता मुद्दाहरूमा प्रतिस्पर्धी राजनीतिक सङ्गठनहरूभन्दा कांग्रेस अब्बल हो भनेर आफ्ना राजनीतिक मुद्दाहरू स्थापित गर्ने नेतालाई भावी सभापतिका रूपमा हेर्न कांग्रेसका सबैले चाहेका छन् ।हामीले पार्टीभित्र मानिसलाई आकर्षण गर्ने मात्र होइन, भइरहेकालाई पनि राजनीतिक संरक्षण दिनुपर्‍यो । आउनेलाई पनि संरक्षण दिनुपर्‍यो । हामी उम्मेदवारहरूमा यस किसिमको योग्यता हुनुपर्छ । हाम्रा विचारहरू सुनेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्नुहुन्छ ।
पार्टीमा गुट, उपगुटहरू हुनु अस्वाभाविक होइन, प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होस् भन्नेमात्रै हो । महाधिवेशनलाई लिएर गुटहरू झन् प्रष्ट हुँदै जालान् । तपाईंको चाहिँ स्थिति के हो ?
चौधौँ महाधिवेशनमा परम्परागत गुटहरू रहन्नन्, समाप्त भएर जान्छन् । हरेक उम्मेदवारहरूले आआफ्नो समूह निर्माण गर्नुहुन्छ । विधानको परिधिभित्र रहेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । तेह्रौँ महाधिवेशनका गुटहरू रहँदैनन् भन्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कार्यकालको साढे चार वर्षभन्दा बढी बिताइसक्नु भएको छ । पार्टीका वर्गीय सङ्गठनहरू अधिवेशन नभएर विघटनको अवस्थामा छन् । विधानअनुसार ६ महिनाभित्र बनिसक्नुपर्ने विभागहरू अहिले गठन हुँदैछन् । यस्ता धेरै कुरा देखाएर देउवाको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नेतृत्व कौशल भएन भन्ने आरोप छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
हामीले दुई वटा कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर २७ जनाले हस्ताक्षर गरेर पार्टीमा बुझाएका छौँ । महाधिवेशन घोषणा भएपछि विभागको विस्तार निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भयो । यसमा सुधार हुनुपर्छ भनेका छौँ । क्रियाशील सदस्यता वैधानिक र पारदर्शीरूपमा हुनुपर्छ भनेका छौँ । यी सबै कुरामा वार्ता चलिरहेको छ ।वार्ताबाट एउटा निष्कर्ष आउँछ र केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा छलफल हुन्छ ।
सभापतिका रूपमा देउवाको कार्यकालबारे थप केही प्रष्ट पारिदिनुहोस् न ! थोरै समीक्षा गरिदिनु न !
चौधौँ महाधिवेशनमा म आफू सभापतिको उम्मेदवार हुने भएकाले वर्तमान सभापतिका बारे बोल्नु उचित हुँदैन । म दाबेदार नभएको भए मैले बोल्न मिल्थ्यो । मैले कसैको व्यक्तिगत विषयमा टीकाटिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन ।
मैले व्यक्तिगत होइन, नेतृत्वको कुरा सोधेको ?
आखिर नेतृत्व पनि व्यक्तिले नै गर्ने हो नि ! म आफैँ उम्मेदवार भएकोले व्यक्तिगत टीकाटिप्पणी गरेँ भने आचारसंहिताको उल्लंघन भएको हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन होस् कि बैठक, कहिल्यै पनि सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमका बारेमा छलफल, बहस हुँदैन । हुन्छ त केवल गुटहरूको लेनदेन, तेरोमेरो भन्नेमा मात्र । कांग्रेसको सिद्धान्त र कार्यक्रममै प्रश्न उठेको सुनिन्छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
म सभापति पदमा निर्वाचित भएँ भने भागबण्डाको राजनीति समाप्त पार्छु । भागबण्डाले कांग्रेसलाई नै समाप्त गर्‍यो । भागबण्डाले नेपालको राजनीति नै दूषित बनायो । राजनीतिक दलहरू र राज्यसत्तामा हुने भागबण्डाले राजनीति नै प्रदूषित बनायो ।कांग्रेसमा मात्रै होइन, सबै मिलेर सबैतिर भागबण्डाको राजनीति समाप्त गर्नुपर्छ । पार्टीको राजनीति विधानअनुसार र देशको राजनीति संविधानअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ ।विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्दा सुरुमा केही अप्ठ्यारो होला । केही व्यक्तिहरूलाई समस्या पर्ला तर कालान्तरमा पार्टी बलियो हुन्छ । व्यक्तिलाई हेरेर पार्टीको विधान बनाउने होइन । व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर विधान संशोधन गर्ने होइन । विधानअनुसार व्यक्ति परिवर्तन हुनुपर्छ।पार्टीलाई विधानअनुसार र देशलाई संविधानअनुसार चलाउँदा पार्टी राम्ररी चल्छ, देशमा सुशासन हुन्छ ।कांग्रेसमा अबको बहस व्यक्ति र नेतृत्वको विषयमा मात्रै होइन, नीति र कार्यनीतिको विषयमा पनि हुनुपर्छ । चौधौँ महाधिवेशनमा कांग्रेसको नीति, कार्यनीति, रणानीति र कार्यक्रमका विषयमा पनि छलफल हुनुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेसलाई विपक्षी भूमिकाका लागि मतादेश छ तर कांग्रेसको विपक्षी भूमिकामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विपक्ष न संसदमा छ न बाहिर, विपक्षी दलका नेता नै सरकारको सहयोगी जस्ता भए, संवैधानिक अङ्गहरूमा भागबण्डा खोजे, सवैधानिक परिषदले गर्ने नियुक्तिहरू अड्काए भनेर आलोचना हुने गरेको छ । साँच्चै विपक्षीका रूपमा कांग्रेस कमजोर वा असफल नै भएको हो ?
यो सबै अरोप गलत हो । आरोपको मनशाय नै गलत छ । कांग्रेस संसदमा प्रभावकारीरूपमा प्रस्तुत भएको छ । यसपालि त हठातरूपमा संसद अधिवेशन अन्त्य भयो । कोरोनाका कारणले सडकमा जानसक्ने अवस्था भएन ।संसदीय व्यवस्था मान्ने नेपाली कांग्रेसले संसद र सडकमा आफ्नो प्रभाव देखाउने हो । अहिले संसद र सडक दुवै बन्द छन् । यसबाहेक कांग्रेसका नेताहरूले मिडियामा बोलिरहनु भएको छ । पार्टी सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई लिखितरूपमा नै आफ्नो पार्टीको धारणा दिनुभएको छ । मागहरू राख्नुभएको छ ।कांग्रेसले जनसरोकारका सबै विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कांग्रेसका नेता-कार्यकर्ताहरूले आआफ्नो फोरमबाट बोल्नुभएको छ, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
कांग्रेसमा तपाईंको पुस्ताका एक से एक सबल नेताहरू छन् । तपाईंले जस्तै नेतृत्वका लागि दाबी गर्ने क्षमता राख्छन् । यी समकालीनहरूलाई तपाईंको के आह्वान छ ?
म नेपाली कांग्रेसका सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई एउटै आह्वान गर्न चाहन्छु– जजसको जुन जुन तहमा उम्मेदवार हुने योग्यता पुगको छ, त्यहाँ उम्मेदवारी दिने आँट गर्नुहोस् । बार्गेनिङका लागि, आफ्ना लागि र आफ्नाका लागि सिट सुरक्षित गर्न वा राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न कुनै पनि पदमा उम्मेदवारीको दाबी नगर्नुहोस् । आफूले दाबी गरेको पदलाई बार्गेनिङको साधन नबनाउनुहोस् ।मेरा आदरणीय अग्रजहरू र मेरा दौँतरीहरू सबैलाई विनम्रतापूर्वक मेरो आग्रह छ– आफ्नो योग्यताअनुसार उम्मेदवारी दाबी गरौँ तर उम्मेदवारीलाई आफ्नो सुरक्षा र बार्गेनिङको साधन नबनाऔँ ।
डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेनको अन्तिम राष्ट्रपतीय बहसमा माइक्रोफोन अफ गरिने
पत्रकारलाई खाममा पैसा बाँड्ने कांग्रेस महामन्त्रीको अनौठो धन्दा !